एक्लै लोकबहादुरले कसरी गरे ६ जनाको नरसंहार? प्रहरीलाई पनि खड्कियो यस्ता प्रश्न ? – Classic Khabar
एक्लै लोकबहादुरले कसरी गरे ६ जनाको नरसंहार? प्रहरीलाई पनि खड्कियो यस्ता प्रश्न ?
September 12, 2021 74
पछिल्लो अनुसन्धानको नतिजाले घटनामा आफन्तकै संलग्नता खुलेको छ । घटनामा २६ वर्षीय लोकबहादुर कार्कीको संलग्नता भएपनि एक्लैले बिहानै यस्तो घटना कसरी गराए भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ । संखुवासभा मादी नगरपालिका-१ उम्लिङमा गत सोमबार एकै परिवारका ६ जनाको ह’त्यापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभा, संघीय प्रहरी इकाई धरान र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोली पुगेको थियो। प्रहरी टोली घटनास्थलमा खटिँदा २६ वर्षीय लोकबहादुर कार्की घरमै थिए।
उनी ह’त्या ग’रिएका ५७ वर्षीय तेजबहादुर कार्कीका बढाबाका नाति थिए, नातामा भतिजा। लोकबहादुर घरका जेठा छोरा थिए। आमा गत चैतमा बितेकी थिइन्।उनी हत्या अनुसन्धानमा प्रहरी खटिएका बखत त्यतै देखिन्थे, पत्रकार तथा स्थानीयसँग घटनाबारे कुराकानी पनि गर्थे।
झट्ट हेर्दा ‘सामान्य’ लाग्ने उनले कसरी यतिधेरै मानिसको ह’त्या गर्लान्? सुरूमा त प्रहरी नै बुझ्न सकिरहेका थिएनन । सोधपुछ गर्दा भने उनी ‘अनकनाएर’ बोल्थे। यसकारण प्रहरीले उनलाई ‘निगरानी’मा राखेको थियो। प्रहरीले घर छोडेर बाहिर निस्किन उनलाई रोक लगाइएको थियो।
सोमबार उज्यालो भइसकेको थियो, साढे ५ देखि ६ बजेको समय। यकिन गरिनसकिएको यो समयमा लोकबहादुर आँगनमा निस्केका थिए। उनका बुवा र भाइ घाँस का’ट्न बिहानै बारीतिर निस्केका थिए। घरमा एक्लै रहेका बेला उनले तेजबहादुर उकालो लागिरहेको देखेका थिए।
तेजबहादुर खेताला खोज्न भन्दै घरबाट निस्केका थिए। तेजबहादुर र लोकबहादुरको घर डेढ सय मिटरमा दुरीमा पर्छ। तेजबहादुरलाई देख्नेवित्तिकै ‘झोंक’ चलेको थियो , तेजबहादुरले जहिले आफुलाई गा’ली ग’लै’जा गर्थे त्यसदिन पनि आफुलाई त्यस्तै ब्यबहार गरेपछी डिल उक्लिँदै गरेका तेजबहादुरलाई पछाडिबाट टा’उकोमा प्र’हार ग’रे’को बताएका छन्।
‘ए यो लोकेले मा’र्‍यो भन्दै चिच्या’उदै तेजबहादुरको श्रीमतीलाई पनि हि’र्का’एर त्यहि ढा’लेको बताउछन । सासु ढलेको देखेपछि बुहारी अगाडि बढ्दा उनलाई पनि हिर्काएको लोकबहादुरले बताएका छन्।
‘दुई नातिनातिना दौडादौड गर्दैगर्दा उनीहरूलाई ले’खे’टी-ल’खे’टी दा’उराले हि’र्का’एको बताएका छन्,’‘कसलाई कतिपटक हि ‘र्का’एको उनलाई पत्तो पाइनँ भन्छन्।’ त्यसपछि उनले घरै पुगेर कुँडो पकाउन आगो फुकिरहेकी ८४ वर्षीया आमा पार्वतालाई हि’र्काएका थिए।
‘तेजबहादुरलाई मात्रै हि’र्काउन खोजेको भए पनि परिवारका अरु सदस्यले देखेर आफूतिर आएपछि ल खे ट्दै हि र्का एको उनले भनेका छन । केही कारणहरू छन्, हामी अहिले ती कुराहरूको पुष्ट्याइँ गरिरहेका छौं,’ संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय धरानबाट अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले बताएका छन
Prevमोडल गहना वशिष्टले गरिन फेरी अर्को तमासा
Nextजयसिंह धामीको घटनामा उचाल्नु हुन्न भन्दै नेपाल जनता पार्टीले निकाल्यो बिज्ञप्ती, यस्तो काम गर्ने चिनद्धारा पालित पोषित हुन् भन्दै बिरोध